Ama-glucometer lancets - yini? > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Amabhubhu ama-lollts lawo ma-glucometer
Isifo sikashukela i-mellitus sivame kakhulu kunokuba besingathanda. Ngalesi sifo, ukuphazamiseka ohlelweni lwe-endocrine kwenzeka. Iglucose iyayeka ukumunwa, ikhishwe iye egazini, ebangela ukudakwa okunamandla. Kuyadingeka ukubheka njalo izinga le-glucose.
Ukuze wenze lokhu, sebenzisa i-glucometer - izinsiza kusebenza ezikuvumela ukunquma izinga kashukela egazini. Ukusebenza okunjalo akudingeki kuphela kubantu abanesifo sikashukela, kodwa futhi nakubantu abanefomu lesandulela sikashukela.
Ukuphindaphindeka kwezilinganiso kuncike ezicini zesifo nempilo yesiguli. Ngokwesilinganiso, kunconywa ukukala izinga likashukela kabili: ekuseni ngesisu esingenalutho futhi ngehora lesithathu.
Yini i-lancet nezinhlobonhlobo zayo
I-glucometer ifaka lancet - Inaliti emincane ekhethekile yokubhoboza kanye nokufaka amasampula egazi.
Ama-Lancets ayingxenye esetshenziswayo kakhulu kudivayisi, kufanele athengwe kaningi.
Ngakho-ke, udinga ukubaqonda kahle ukuze ugweme izindleko ezingenasidingo. Ngemuva kwakho konke, azishibhile kangako.
Kubukeka njengedivayisi encane epulasitiki lapho kutholakala khona inalithi uqobo. Ithiphu yenaliti ingavala cap elikhethekile ngokuphepha okukhulu. Kunezinhlobo eziningi zama-glucometer, ahlukile zombili kumgomo wokusebenza nentengo.
Ama-Lancets ngokwawo angaba ezinhlobo ezimbili:
Uhlobo ngalunye lunezinzuzo zalo, ukukhetha kuncike ekukhethweni komuntu ngamunye.
Universal zilungele ngoba zilungele noma imitha. Imvamisa, uhlobo ngalunye lwedivayisi ludinga imisebe yalo yokumaka okuthile. Ngobunzima bendawo yonke abuveli. Ukuphela kwemitha abangaguqukelwa kuyo yiSoftix Roche. Kodwa idivaysi enjalo ayishibhile, ngakho ayisetshenziswa kakhulu. Kuyinto elula futhi ngoba ilimaza isikhumba kancane. Inaliti ifakwa esibayeni esikhethekile esingafakwa ngokwezifiso zezimpawu zesikhumba sakho.
Zitholela inalithi encane yokuzenzakalelayo, okuvumela ukuthi wenze amasampula egazi cishe ngokungenangqondo. Ngemuva kokusebenzisa i-lancet enjalo ngeke kube khona umkhondo, isikhumba ngeke silimale. Ngaye, awudingi peni noma amanye amadivaysi. Umsizi omncane uzothela ithonsi legazi ngokwakhe, akunakulungele ukuthi achofoze ekhanda lakhe. Ngenxa yokuthi inaliti yakhe incane kuneyendawo yonke, ukubhoboza kwenzeka ngokungacabangi esigulini.
Kunesigaba esehlukile - sezingane. Yize abaningi bethanda ukusebenzisa indawo yonke ngenxa yezindleko ezikhuphukayo zezingane. Kunezinaliti ezikhethekile ezibukhali ngangokunokwenzeka ukuze isampula yegazi ingalethi ukukhathazeka enganeni encane. Indawo yokubhoboza ngemuva kwalokhu ayilimazi, inqubo ngokwayo isheshayo futhi ayinabuhlungu.
I-Acupressure yesifo sikashukela. Izisekelo nezincomo zokusetshenziswa
Iphayinaphu yesifo sikashukela: izinzuzo nokulimaza. Funda kabanzi kule ndatshana.
Ama-insulin patches - imijovo ayinakubuhlungu futhi ifike ngesikhathi!
Kudingeka ziguqulwe kangaki?
Umenzi ngamunye uthatha ukusetshenziswa okukodwa kwanoma yiluphi ilancet. Lokhu kungenxa yokuthi inalithi ngayinye ayicijile, ifakwe isivikelo esingeziwe ukuyivikela. Ngokudalula inaliti, ama-microorganisms okungenzeka ukuthi asegazini awela kuyo. Ukutheleleka kwegazi, ukutheleleka ngamagciwane ezithweni zomzimba kanye nemiphumela emibi kakhulu kudinga ukushintsha i-lancet ngemuva kokusetshenziswa okukodwa.
Uma usebenzisa i-othomathikhi, khona-ke kunohlelo olwengeziwe lokuvikela olwakhiwe kulolo oluyovumela ukusetshenziswa kwesibili. Kulokhu, okuzenzakalelayo kunokwethenjelwa kakhulu ngenxa yobukhona bento yomuntu.
Lapho usebenzisa izinaliti ezigcwele indawo yonke, iziguli zibeka engcupheni ngamabomu futhi zisebenzisa i-lancet eyodwa kuze kube yilapho seziqhuma.
Kuzo zonke izingozi ezingaba khona, kuvunyelwe ukusebenzisa ilancet kanye ngosuku. Lokhu kulula uma kufanele uthathe izilinganiso eziningana ngosuku. Kepha udinga ukucabanga ukuthi ngemuva kokubhobozwa kwesibili, inalithi iba ntekenteke futhi kukhona nengozi yokuthola ukuvuvukala endaweni yokubhoboza.
Izindleko zamalansi, njenganoma yimuphi umkhiqizo, kuya ngezici ezimbalwa ezibalulekile:
Ungaselapha kanjani isifo sikashukela? Uyini umehluko phakathi kokwelashwa kohlobo 1 lwesifo sikashukela?
Izinongo ekwelapheni isifo sikashukela: ama-clove nezakhiwo zawo ezizuzisayo
Kuyini i-metabolic syndrome? Yiziphi izimpawu nezimo eziphawula lesi simo?
Ngakho-ke, inombolo eyodwa yamanqe avela kubakhiqizi abahlukahlukene azohluka ngentengo. The eshibhile kukhona universal. Zingathengiswa ngezingcezu ezingama-25. noma ama-200 ama-PC. ebhokisini linye. AbasePoland cishe babiza ama-ruble angama-400, amaJalimane kusuka kuma-ruble angama-500. Futhi cabanga ngenqubomgomo yamanani ekhemisi uqobo. Uma ngabe ikhemisi elingamahora angama-24, izindleko zizophakama. Emakhemisi osuku, inani lentengo liphelele.
Okuzenzakalelayo kuyabiza kakhulu. Ngakho-ke, iphakethe lama-200 ama-pcs. izobiza kusuka kuma-ruble ayi-1,400. Lapha ikhwalithi icishe ifane, ngakho-ke, izwe lemvelaphi alinendaba kangako.
Ama-Lancets ayadingeka kwiziguli ezinesifo sikashukela, ngaphandle kwalokho ingozi yempilo yazo izokwanda kaningana. Ngaphezu kwalokho, inani le-glucose elitholwe phakathi nesifundo likuvumela ukuthi uguqule umsoco nokwelashwa. Ukuthenga ama-lancets sekuphelile ukuba nzima; cishe wonke amakhambi ekhemisi anokukhetha okuhle. Kuhlala kuphela ukukhetha uhlobo nokunquma inani elifanele.
I-Glucometer lancets: yini?
Imitha ine-lancet - inaliti emincane eklanyelwe ngokukhethekile, edingekayo ukubhoboza kanye nokufaka amasampula egazi.
Nguyena oyingxenye esetshenziswayo kakhulu yedivayisi. Izinaliti kufanele zithengwe njalo. Ukukhetha kahle lapho uthenga, kufanele uqonde kahle lezi zingxenye. Lokhu kuzogwema izindleko ezingadingeki ezingalindelekile.
Kumele kwaziwe ukuthi ziyabiza impela. I-lancet ifana nedivayisi encane ecaleni le-polymer, lapho kutholakala khona inalithi uqobo. Njengomthetho, ithiphu yayo ingavalwa nge-cap ekhethekile ngokuphepha okukhulu.
Izinaliti ze-Glucometer ziza ngezinhlobo ezimbili eziyinhloko:
Ngayinye yazo inezimpawu zayo. Ukuzikhethela kuncike kuphela ekuthandweni komuntu siqu. Kumele kwaziwe ukuthi uhlobo lokuqala luhle ngoba lungasetshenziswa ngokuphelele kunoma yiluphi uhlobo lwama-glucometer.
Imvamisa, idivaysi ngayinye inemikhonto yayo yokumaka okuthile. Kungenxa yendawo yonke lapho inkimbinkimbi enjalo ingaveli. Uhlobo kuphela lwemitha yamazinga kashukela abangakulungeli yiSoftix Roche. Kufanele kwaziwe ngaleso sikhathi ukuthi akushibhile futhi kungabikhona kuwo wonke umuntu. Kungakho bambalwa abantu abasebenzisa i-aggregate enjalo.
Ama-lancets e-Universal alungele ukusetshenziswa, ngoba awalimazi isikhumba esibuthakathaka. Inaliti ifakwe ngokucophelela esibayeni, okulula ukusishintsha ngokuya ngezici ezihlukile zesikhumba sayo.
Kepha izakhi ezizenzakalelayo zinenalithi emincane kakhulu, ezisiza ukwenza amasampula egazi acishe abe imperceptibly. Ngemuva kokusebenzisa i-lancet enjalo, akukho mkhondo obonakalayo. Isikhumba ngeke futhi silimale.
Ngezinaliti ezinjalo, awudingi ipeni elikhethekile noma amadivaysi angeziwe. Umsizi we-mini uzothatha igazi uqobo: ngoba lokhu kwanele ukumane achofoze ekhanda lakhe.
Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi kunesigaba esihlukile sama-lancets - izingane. Abantu abaningi bathanda ukusebenzisa indawo yonke ngoba ishibhile kakhulu.
Ama-lancets wezingane ahluke kakhulu ngezindleko - zi-oda lokuphakeme kakhulu kunezinye izigaba zezakhi.
Intengo ephezulu inengqondo. Izinaliti zezingane zibukhali ngangokunokwenzeka. Lokhu kuyadingeka ukuze inqubo yokuboniswa kwegazi inikeze okungenani imizwa engathandeki enganeni. Indawo yokubhoboza izithobo ngeke ilimaze, futhi inqubo ngokwayo isheshayo futhi icishe ibe buhlungu.
Ungayisebenzisa kanjani ipeni lokubhoboza?
Okulandelayo, udinga ukufaka i-lancet engasetshenziswanga engafanele engxenyeni exhunywe ngokukhethekile bese ubuyisela cap.
Usebenzisa iswishi ekhethekile, khetha ukujula okudingakalayo kwesikhombo ekugcineni kwekhwela. Okulandelayo, hlala isibambo.
Bese uletha i-auto-pierer esikhunjeni bese wenza ukubhoboza ngokucindezela inkinobho ekhethekile yokukhulula. Ngemuva kwalokho, susa ngokucophelela i-cap kusuka ku-piercer bese ufaka i-lancet esetshenzisiwe ekhethekile.
Susa ilancet ngokucindezela inkinobho yokukhipha. Faka ithumba lokuvikela kwisibambo sokubhoboza.
Kukangaki udinga ukushintsha izinaliti?
Kuyaphawuleka ukuqaphela ukuthi cishe wonke umenzi uthatha ukusetshenziswa okukodwa kwanoma yiluphi ilancet (inaliti).
Lokhu kungenxa yokuphepha kwesiguli. Inalithi ngayinye ayinabala futhi ifakwe nokuvikelwa okwengeziwe.
Lapho inalithi idalulwa, amagciwane angangena kuwo, okuthi,-ke, angene kalula egazini lesiguli. Umphumela walokhu kungaba: ubuthi begazi, ukutheleleka kwezitho ngamagciwane we-pathogenic. Imiphumela eyingozi futhi engathandeki nayo kungenzeka.
Uma kusetshenziswa ama-lancets othomathikhi, khona-ke kukhona uhlelo lokuvikela olungavumeli ukusetshenziswa kwesibili. Kungakho lolu hlobo luthembeke kakhulu. Lokhu kuzokuvikela emiphumeleni eyingozi.
Lapho usebenzisa izinaliti zomhlaba wonke, iziguli zama-endocrinologists ziba nezingozi futhi zisebenzise i-lancet efanayo kuze kube umzuzu lapho uyeka ukubhoboza isikhumba ngokujwayelekile.
Izibambo ezicelwe kakhulu
Ama-lancets athandwa kakhulu nama-glucometer afanele kuwo:
I-Microlight. Imvamisa, lezi zinaliti zisetshenziselwa ukuhlaziya okufana noMjikelezo Wezimoto,
I-Medlans Plus. Lezi zinsimbi zivame ukusetshenziselwa amasampula egazi ezinganeni ezincane. Inqubo ayinobuhlungu, ngakho-ke ngeke idale ukungaphatheki kahle ezinganeni,
I-Accu Chek. Izinalithi ezinjalo zisetshenziswa njengesethi ephelele yama-glucometer egama elifanayo. Zenzelwe ngqo ukunciphisa ukungahambi kahle ngesikhathi sokupenda. Ubuhle balezi lancets ukuthi izinaliti zintekenteke ikakhulukazi. Ububanzi bawo ngamunye buyi-0,36 mm. Isisekelo esithe xaxa simbozwe ungqimba lwe-silicone, okwenza ama-punctures abuhlungu ngokuphelele. Uhlobo lwamanenjana - izinaliti ezingalahlwa,
IME-DC. Izinaliti ze-Universal ze-ultrathin zinesimo esingajwayelekile, ngenxa yazo asetshenziswa ngenkuthalo ngenani elikhulu lama-glucometer. Lokhu kukuvumela ukuthi uthole ukubhobozwa kwesikhumba okusobala futhi kungenhlungu. Ukugqama kwalezi lancets ukuthi zenziwe ngensimbi ekhethekile esezingeni eliphakeme kakhulu enziwe ngomshini onqenqemeni lomkhonto onxantathu. Izinaliti zakho ezincane zenza inqubo ingenabuhlungu ngokuphelele. Ububanzi benaliti engxenyeni yayo ebanzi bungu-0.3 mm kuphela. Lezi zinsimbi zingasetshenziswa ngisho neziguli ezihlushwa isifo samathambo (iminwe ebuthakathaka). Ngokuqondene nefomu lokukhipha, iphakethe elilodwa liqukethe izinaliti eziyi-100,
IDroplet. Ama-lancets lawo abaluleke kakhulu kulezi ziguli ze-endocrinologists ezihlushwa i-carbohydrate metabolism noma zingadingi ukubhekwa njalo kweglue glucose emzimbeni. Izinaliti zisetshenziselwa ukubhoboza isikhumba ngokucophelela ngenhloso yokuthatha igazi. Udinga okuncane kakhulu ukuze uhlole izinga le-cholesterol noma ushukela ku-plasma. Inzuzo eyinhloko yama-lancets anjalo ukuhlanzeka okuphezulu. Imisebe yeGamma icoca ngenaliti lapho kukhiqizwa. I-cap ethembekile yokuvikela iqinisekisa ukuthi amagciwane awangeni egazini lomuntu ogulayo,
Yini ama-glucose metres lancets? Impendulo ekuvidiyo:
Amabhubesi abalulekile kubo bonke abantu abanesifo sikashukela, ngaphandle kwalokho usongo lwempilo lukhuphuka kaningana. Ngaphezu kwalokho, amanani kashukela wegazi atholakala ngesikhathi sokufunda asiza ukulungisa umsoco nokwelashwa. Ukuthengwa kwezinaliti manje akubangeli ukuphazamiseka, ngoba cishe wonke amakhambi ekhemisi anezinto eziningi ezikhethiwe.
Ama-glucmeter abizwa ngokuthi amadivayisi aphathekayo akala ushukela wegazi. Isenzo iningi labo lisuselwa ekuhlolweni komunwe wesiguli, amasampula egazi, ukusetshenziswa kwaso kumucu wokuhlola nokunye ukuhlaziya. Ukwenza i-pununch, kusetshenziswe izindonga ze-glucometer (ngamanye amagama, izinaliti).
Ama-Lancets abhekwa njengomunye wokudla ojwayelekile othengwa ngabathengi beshukela. Ukusetshenziswa kwabo kuyasebenza, kuphephile futhi kucishe kube kubuhlungu, ubungozi bokutheleleka ngazo zonke izinhlobo zezifo kuncishiswa kaningi. I-athikili ibheka ukuthi yiziphi izinaliti zemitha yeglucose, izinhlobo zazo, ukuthi ungasebenzisa kangaki amadivaysi nezici zokukhetha.
Inaliti ye-Universal ye-glucometer
Izinaliti ezi-Universal zilungele wonke amamitha weglucose ephathekayo. Ukuwukuphela komshini lapho izingqimba zaleli qembu zingashintshiwe i-Accu Chek Softlix. Le divayisi ibiza kakhulu, ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo akuvamile.
Uhlobo lwenaliti yohlobo lonke lulimaza kancane isikhumba ngesikhathi sokugcotshwa. Idivayisi ifakwe isibambo, esiyingxenye ye-glucometer. Abakhiqizi bangenza lolu hlobo lwe-punctr lube lula kakhulu ngokungeza umsebenzi ukulawula ukujula kokulimazeka. Lokhu kuyadingeka uma kwenzeka kukalwa izinkomba zoshukela ezinganeni ezincane.
Kubalulekile! Izinaliti zihlotshiswe ngezivikelo zokuvikela, eziqinisekisa ukuphepha nokuthembeka.
I-lancet yokubhoboza ezenzakalelayo
Okokubhoboza okuzenzakalelayo kungukuhlanganiswa kwezinaliti ezingena esikhundleni. Awudingi peni ukuze ulisebenzise. Naye uqobo uzothatha ithonsi legazi, kufanelekile ukulibeka emunweni bese ucindezela ikhanda. I-lancet ifakwe ngenalithi emincane eyenza ukubhula kungabonakali, kungabi nazhlungu. Inalithi efanayo ayikwazi ukusetshenziswa futhi. Ngemuva kokusetshenziswa, iyasuswa futhi ilahlwe (kungenzeka ukuyibeka esitsheni esikhethekile sezinto ezibolile ezingadingeki).
Umjikelezo wezimoto uyisibonelo sama-glucometer asebenzisa ama-lancets othomathikhi. Imodeli yakhe inokuvikelwa okukhethekile, okubonakaliswa iqiniso lokuthi obhobozayo uqala ukusebenza kuphela uma ethintana nesikhumba.
Ama-lancets othomathikhi alungele abaneshukela abanesifo sikashukela, ngoba iziguli ezinjalo zilinganisa ushukela kaningi ngosuku.
Iqembu elihlukile elingatholanga ukusetshenziswa okubanzi. Lokhu kungenxa yezindleko eziphakeme zabamele. Izibambo zezingane zinenalithi ezibukhali kakhulu ezinikeza inqubo yokuqoqa igazi ngokungenangqondo futhi engenabuhlungu. Ngemuva kwenqubo, indawo yokubhoboza ayilimazi. Abasebenzisi bakhetha ukusebenzisa i-lancets yendawo yonke yezingane esikhundleni salesi sigaba sezinaliti.
Kukangaki udinga ukushintsha i-lancet?
Abakhiqizi kanye ne-endocrinologists bagcizelela isidingo sokusebenzisa ukubhoboza ngakunye kuphela. Lokhu kungenxa yokuthi inalithi iyinyumba ngaphambi kokusebenzisa. Ngemuva kokuvezwa kwayo nokuklanywa kwayo, ingaphakathi ligxotshwa ngamagciwane.
Ama-lancets ohlobo oluzenzakalelayo athembeke kakhulu kulokhu, ngoba aguqula ngokuzimela, avimbela ukusetshenziswa kabusha. Umuntu kufanele azishintshe ngokwakhe izinalithi ezizenzakalelayo, kodwa ukuze onge imali, iziguli zithanda ukusebenzisa leyo nto kuze kube yilapho ziba buthuntu.Kumele kukhunjulwe ukuthi lokhu kwandisa ubungozi bokuqhamuka nezinqubo zokuvuvukala nezifo ezithinta ngamunye ngokugwinya ngakunye okuphezulu nangaphezulu.
Kubalulekile! Ochwepheshe beze embonweni ojwayelekile wokuthi kwezinye izimo kuvunyelwe ukusebenzisa i-lancet eyodwa ngosuku, noma kunjalo, ukuba khona kobuthi begazi, izifo ezithathelwanayo kubhekwa njengophawu oluphelele lokufaka inalithi ngemuva kwenqubo ngayinye.
Izindleko nokusebenza kwe-lancet
Intengo yababhobozayo incike ezintweni ezimbalwa:
Inkampani yomkhiqizi (Amadivayisi enziwe ngeJalimane abhekwa njengabiza kakhulu),
inani lamalashini kwiphakeji, uhlobo lwedivaysi (imishini yokubhoboza inentengo ye-oda lobukhulu eliphakeme kunamamodeli endawo yonke),
ikhwalithi yomkhiqizo kanye nesimanjemanje,
inqubomgomo yasekhemisi lapho ukuthengiswa kwenziwa khona (amakhemisi osuku anezintengo eziphansi kunekhemisi lamahora angama-24).
Isibonelo, iphakethe lezinaliti ezingama-200 zohlobo lwendawo yonke lingabiza phakathi kwama-ruble angama-300-700, lelo phakethe “lemishini ezenzakalelayo” lizobiza umthengi ngama-ruble ayi-1400-1800.
Ukusebenza kwensiza yokubhoboza kumele icabangele izici ezilandelayo:
ukusetshenziswa kwesikhathi esisodwa (kusamele uzame ukuhambisana nalesi sigaba),
ngokuya ngezimo zokugcina, ama-lancets kufanele abe ekushiseni kwegumbi ngaphandle kwezinguquko ezibucayi,
izinaliti akufanele zivezwe ngoketshezi, umusi, ukukhanya kwelanga okuqondile,
ama-lancets aphelelwe yisikhathi anqunyelwe.
Kubalulekile! Ukuhambisana nemithetho kuvimbela ukwenzeka kwamaphutha ekulinganiseni kwe-glucose egazini.
Amamodeli we-Lancet adumile Ekubukeni
Kunezindawo ezimbalwa zokuthola izisulu ezithole ukuthandwa phakathi kwabasebenzisi beshukela.
Ama-lashts ama-Microllet enzelwe i-Contour Plus glucometer. Inzuzo yabo isuselwa kukhwalithi ephezulu nokuphepha. Izinaliti zenziwe ngensimbi yokwelapha, eyinyumba, ifakwe cap ekhethekile. Ama-laryts ama-Microllet abhekwa njengawomhlaba wonke. Zingasetshenziswa nganoma isiphi isisetshenziswa sokuthola ukubhula ngesampula kanye nesampula yegazi.
I-othomathikhi ye-lancet-scarifier, ilungele amamitha kashukela egazini angadingi inani elikhulu legazi ukuxilongwa. Ukujula kokujuba - 1.5 mm. Ukwenza isampula yezinto ezibonakalayo, kwanele ukunamathisela ngokuqinile iMedlans Plus kwizikhonkwane zesikhumba. Ukubhoboza kusebenze ngokuzimela.
Kuyadingeka ukuthi unake iqiniso lokuthi izicishazi zale nkampani zinekhodi yemibala ehlukile. Lokhu kwenziwa ngenhloso yokusebenzisa amasampula egazi ezinhlobo ezahlukahlukene, ukunakwa kukhokhelwa ohlotsheni lwesikhumba. Ngosizo lwezinaliti zeMedlans Plus, kungenzeka ukubhoboza ama-earlobes kanye nezithende zokuqoqwa kwezinto eziphilayo.
Kunezinhlobo eziningi zesikhafu ezivela kule nkampani ezisetshenziswa kumadivayisi athile. Isibonelo, ama-lancets ama-Accu Chek Multiklix alungele i-gluceter ye-Accu Chek Perform, izinaliti ze-Accu Chek FastKliks ze-Accu Chek Mobile, ne-Accu Chek Softclix zenzelwe amadivayisi wegama elifanayo.
Kubalulekile! Zonke izithako ezingcolile ze-silicone camera, ziyinyumba, futhi zihlwitha indawo yamasampula wegazi ngaphandle kwemiphumela emibi.
Cishe zonke izikhungo zokuzenzisa zifakwe izinaliti ezinjalo. Zinobukhulu obuncane obunokwenzeka, ezisetshenziswa kabanzi ukuthola amasampula egazi ezinganeni ezincane. Ama-Lancets awomhlaba jikelele, umakhi - iJalimane. Izinaliti zinokucijiswa okwenziwe ngomkhonto, isisekelo sokubethelwa, esenziwe ngensimbi ephezulu yokuhlinza.
Ama-lancets aseChinese azenzakalelayo, akhishwa ngendlela yezinhlobo ezi-6 ezihlukile, ahlukile komunye nomunye ngokujula kokubhoboza kanye nokuqina kwenalithi. Ukubhoboza ngakunye kune-cap yokuvikela evikela ukungabi namandla kohlelo.
Imodeli iyahambelana namaphethini okuzenzakalelayo amaningi okuzenzakalelayo, kodwa angasetshenziswa ngaphandle kwazo. Ingxenye yangaphandle ye-lancet imelwe yi-capsule yezinto ezibonakalayo ze-polymer. Inaliti yenziwe ngensimbi ebanga yezokwelapha, ihlanganiswe kuyo yonke ubude. Umkhiqizi - ePoland. Ilungele wonke amamitha kashukela egazini ngaphandle kwe-Accu Check Softclix.
Yakhelwe ukusebenzisana namadivayisi we-One Touch (Okukhethwa kukho okukodwa, i-Van Touch Ultra). Umkhiqizi - e-USA. Ngenxa yokuthi izinaliti ziwumhlaba wonke, zingasetshenziswa nabanye ababhobozayo bezimoto (iMicrolight, i-Satellite Plus, i-Satellite Express).
Kuze kube manje, ama-lancets abhekwa njengamadivayisi amukeleka kakhulu. Basiza ekuboneni izinkomba zeglucose yegazi, futhi, ngokufanelekile, zenze ukwelashwa kwalesi sifo kuphumelele kakhudlwana. Okufanele ukhethe amadivaysi okusetshenziswa kuyisinqumo somuntu ngamunye seziguli.
Ama-Lancets angenye yezinto ezidliwayo ezisetshenziswa kaningi ngabanesifo sikashukela ukulawula i-glycemia nge-glucometer.
Ukusetshenziswa kwabo kubhekwa njengokusebenza ngempumelelo, cishe okungenazinhlungu futhi kuphephile, ngoba kuhambisana nengozi encane yokutheleleka.
Izinaliti ze-Glucometer ziyehluka ngesimo, ubukhulu, umthunzi futhi zisetshenziswa ngokuhambisana nenkampani ethile yokubhoboza. Zenzelwe ukusetshenziswa okukodwa, ngakho-ke iziguli kufanele ziqonde ukuthi zingazisebenzisa kanjani, nokuthi iyiphi ithuluzi elisebenziseka kalula ukuzisebenzisa.
Izinhlobo zama-lancets e-glucometer
Kusetshenziswa izinalithi zegazi zeminwe ukulawula i-glycemia. Ukuhlola kwenziwa ekhaya noma elabhoratri kusetshenziswa i-glucometer. Le ndlela yokuqapha amazinga eglucose ithathwa njengeyona elula kakhulu futhi engenabuhlungu kakhulu.
Ikhithi yedivayisi ehlaselayo ifaka idivaysi ekhethekile yokubhoboza, ekuvumela ukuthi uthole inani elifanele legazi lokutadisha. Kudingeka izinaliti ezincane ukucosha okubhalwe phansi, okufakwe ngaphambili kufakwe esibayeni.
Izinaliti ezijwayelekile. Zilungele cishe bonke abahlaziyi. Amanye ama-glucometer afakelwe izikhonkwane ezikhethekile, ezibandakanya ukusetshenziswa kwezinaliti ezithile kuphela. Amadivaysi anjalo awashadile futhi awayona ingxenye yesigaba sesabelomali, athandwa ngabantu (ngokwesibonelo, ama-Accu Chek Softclix lancets). Idivaysi yokuthola igazi ingashintshwa ngokusetha ukujula kokubhoboza okufanele iminyaka yobudala yesiguli (kusuka ezinyombeni ezi-1 kuye kweziyi-5 esikalini somlawuli). Ngesikhathi sokuhlinzwa, umuntu ngamunye uzikhethela inketho efaneleke kakhulu.
I-lancet ezenzakalelayo. Inzuzo yemikhiqizo enjalo ukusetshenziswa kwezinaliti ezinhle kakhulu, lapho ukubhoboza kwenziwa ngaphandle kobuhlungu. Isibambo sokubhoboza iminwe sivumela ukufakwa kwamalambu angena esikhundleni. Ukukhiqizwa kwegazi kwenzeka ngokucindezela inkinobho yokuqalisa yomkhiqizo. Ama-glucometer amaningi avumela ukusetshenziswa kwezinaliti ezizenzakalelayo, okuyinto eyisisekelo lapho ukhetha idivaysi yohlobo lwesifo sikashukela 1. Isibonelo, i-Contour TS lancets yenziwe yasebenza kuphela ngesikhathi sokuthintana nesikhumba, ngaleyo ndlela inciphisa ubungozi bokutheleleka.
Amabhubesi ezingane. Bawela esigabeni esihlukile. Izindleko zabo ziphakeme kunemikhiqizo ejwayelekile. Amadivaysi afakelwe inaliti ebukhali kakhulu futhi emincane, ngakho-ke isampula yegazi ishesha futhi ayinabuhlungu ngokuphelele, kubalulekile ezigulini ezincane.
Kufanele uguqule kangaki izishintshi?
Abantu abangazi ukuthi ungasisebenzisa kangaki i-lancet kufanele bakhumbule ukuthi okutholakalayo kungachithwa futhi kufanele kufakwe esikhundleni ngemuva kokuphothula ukuhlolwa. Lo mthetho usebenza kuzo zonke izinhlobo zezinaliti futhi ukhonjisiwe kwimiyalo yama-glucometer abakhiqizi abahlukahlukene.
Izizathu zokuthi kungani ungakwazi ukusebenzisa izinaliti kabusha:
Isidingo sokushintshwa okujwayelekile kuhlotshaniswa nengozi enkulu yokutheleleka uma kungenzeka ukuthi isetshenziswa kaningi, ngoba ngemuva kokubhoboza amagciwane, ama-pathogen angangena empompini yenaliti futhi angene egazini.
Izinaliti ezizenzakalelayo eziklanyelwe ama-punctures zifakwe ukuvikelwa okukhethekile, okwenza kungakwazi ukuzisebenzisa futhi. Okudliwayo okunjalo kubhekwa njengokuthembeke kakhulu.
Ukusetshenziswa kaninginingi kuholela ekufiphalweni kwenaliti, ngakho-ke ukubhoboza okuphindaphindiwe ngesampula yegazi kuzobe kubuhlungu futhi kungalimaza kakhulu isikhumba.
Ukuba khona komkhondo wegazi elondeni ngemuva kokuhlolwa kungadala ukukhula kwama-microorganisms, okuthi, ngaphezu kwengozi yokutheleleka, kungahlanekezela imiphumela yokulinganisa.
Ukusetshenziswa okuphindaphindekayo kokusetshenziswayo kuvunyelwe kuphela ezimweni lapho kuhlelwa khona ukuthi kubhekwe izinga le-glycemia kaninginingi ngosuku olulodwa.
Amanani akhona kanye nemithetho yokusebenza
Intengo yephakeji incike ezicini eziningana:
inani leenaliti elingena kulo,
ukutholakala kwezimpawu ezengeziwe.
Izinaliti zomhlaba wonke zithathwa njengemikhiqizo eshibhile, echaza ukuthandwa kwazo okuphezulu. Zithengiswa kunoma iyiphi ikhemisi nakuzo zonke izitolo ezikhethekile. Izindleko zephakethe elincane zihluka kusuka kuma-ruble angama-400 kuya kwangama-500, kwesinye isikhathi ziphakeme ngisho nangaphezulu. Amanani aphezulu akho konke okusetshenziswayo ayatholakala kumakhemisi asondelene nehora.
Imitha yemitha ivame ukufakwa nedivaysi, ngakho-ke lapho uthenga izinaliti, kuqala kunikezwa okutholakalayo okuhambisanayo.
Ngemuva kwesilinganiso ngasinye, kubalulekile ukushintsha inaliti emamitha. Odokotela nabakhiqizi bezinto abazikhuthazi ukusetshenziswa komkhiqizo osetshenzisiwe kabusha. Uma isiguli singenalo ithuba lokumbuyisela esikhundleni, khona-ke ngokuhlolwa okuphindaphindiwe, ukubhoboza ngenaliti efanayo kufanele kwenziwe ngumuntu ofanayo. Lokhu kungenxa yokuthi izinto ezidliwayo ezinjalo ziyindlela yomuntu ngamunye yokulawula i-glycemic.
Amadivayisi we-punning kufanele agcinwe kuphela ezindaweni ezomile nezimnyama. Ekamelweni lapho kutholakala khona ikhithi yokulinganisa, kunconywa ukuthi ulondoloze izinga elifanele lomswakama.
Ngemuva kokuhlola, inaliti esetshenzisiwe yesikhafu kufanele ichithwe.
Izandla zesiguli kufanele zigezwe futhi zomiswe ngaphambi kokulinganiswa ngakunye.
Hlola i-algorithm ka-Accu-Chek Softclix:
Susa isicoco esivikela inzipho yenaliti esibambo.
Faka isibambiso sokubamba kude yonke indlela kuze kufike ukuqhafaza kwezinhlamvu.
Susa isicephu kusukela lancet.
Faka esikhundleni isicephu esivikela emzimbeni wesibambo, uqiniseke ukuthi i-notch kudivayisi ihlangana nesikhungo sokusika esisenkabeni yokuhamba kwenaliti.
Khetha ukujula kokujovwa bese uyilungisa.
Letha ipeni ebusweni besikhumba, cindezela inkinobho yokuvala ukubhoboza.
Susa i-cap kusuka kuthuluzi ukuze inaliti esetshenzisiwe isuswe kalula futhi ilahlwe.
Isifundo sevidiyo ngokusebenzisa ipeni lokubhoboza:
Ikhwalithi yiphuzu eliyinhloko elinakwa kakhulu inqubo yokulawulwa kwe-glycemic. Noma yisiphi isimo sengqondo sokunganaki kuzilinganiso sikhulisa ubungozi bokutheleleka kanye nokuvela kwezinkinga. Ukunemba komphumela kuncike kulungiswa okwenziwe ekudleni nasemithanjeni yezidakamizwa ezithathiwe.
Imikhiqizo ephambili efunwayo emakethe yezihluzi yiyona amamodeli alandelayo:
I-Lancets Microlight. Imikhiqizo yenziwa ngokuqondile ukusetshenziselwa imitha ye-Contour TC. Isibambo senziwa ngensimbi yezokwelapha, okuyizimpawu zayo ezithembekile nokuphepha okusetshenziswayo. Imikhiqizo ibonga oyinyumba kumakhokhethi wokuvikela atholakalayo. Izinaliti zale divayisi zisebenza indawo yonke, ngakho-ke, zilungele imitha yeSatellite Express, i-Ajchek namanye amamodeli wesabelomali.
I-medlant plus. Imikhiqizo mihle ngokuhlolwa nabahlaziyi banamuhla abasebenza ngegazi elincane. Ukujula kokuhlaselwa, okunikezwe yithuluzi, kungu-1.5 mm. Igazi lithathwa ngokunamathisela ngokuqinile ithuluzi ebusweni besikhumba emunweni, futhi ukufakwa kwenqubo kwenzeka ngokuzenzakalelayo. Ama-Lancets akhiqizwa ngaphansi kwalolu hlobo ahlukile ekufakweni kombala, okwenza sikwazi ukukhetha ivolumu yobukhulu besikhumba sakho. Ukuhlaziywa, noma iyiphi ingxenye yomzimba ilungile.
I-Accu Chek. Imikhiqizo yenziwa ngumenzi waseRussia futhi ilungele amamodeli amadivayisi ahlukahlukene. Zonke izinhlobo zama-lancets ziphathwa nge-silicone, eqinisekisa ukuhlolwa kwe-sterility nokuphepha.
IME-DC. Lolu hlobo lokucushwa lukhona cishe kubo bonke ozenzakalelayo. Lawa ngemikhonto yobubanzi obuvumelekile obuvumelekile, okulungele ukwenza ukuhlola kwe-glycemic ezinganeni. Imikhiqizo yenziwa eJalimane. Banokucijiswa okwenziwe ngomkhonto, isisekelo esimise okomnqamlezo, futhi okokukhiqiza okuyinhloko yinsimbi eqinile yezokwelapha.
Prolance. Imikhiqizo yenkampani yaseChinese ikhiqizwa ngohlobo lwamamodeli ayi-6 ahlukene, ahlukene ngobukhulu nangobukhulu bokubhoboza. Izimo ezingonakele ngesikhathi sokuhlaziywa ziqinisekiswa yikhompiyutha yokuvikela efakiwe inalithi ngayinye.
IDroplet. Ama-Lancets asetshenziswa hhayi ngamadivayisi ahlukahlukene, kepha futhi ngokuzimela. Inaliti ivalwe ngaphandle nge-capsule ye-polymer, eyenziwe ngensimbi ekhethekile eyenziwe ngombala yinkampani yasePoland. Imodeli ayihambelani ne-Accu Chek Softclix.
Ukuthinta okukodwa. Le nkampani yathuthukisa inalithi yemitha yeVan Touch Select. Zisigaba sesigaba sezinto ezisetshenziswayo, ngakho-ke zingasetshenziswa namanye amapeni aklanyelwe ukubhoboza ingaphezulu lesikhumba (ngokwesibonelo, i-Satellite Plus, iMikrolet, i-Satellite Express).
Kubalulekile ukuqonda ukuthi ukukala ekhaya kufanele kwenziwe ngokunakwa okukhethekile, ukuhambisana nakho konke ukuncoma nomthwalo wemfanelo. Le mithetho isebenza kuzo zonke izinhlobo zama-glucometer nokudla okudingekayo ocwaningweni.
Imiphumela etholakele isivumela ukuthi siqonde izinguquko ezisezingeni le-glycemia, sihlaziye izizathu eziholele ekuphambukeni kwedatha kusuka kokujwayelekile. Ngaphandle kwalokho, izenzo ezingalungile zingahlanekezela inkomba futhi zinikeze amanani angalungile angadida ukwelashwa kweziguli.